Shangri-la Blinds Fabric Venuvers & Supplier-China Shangri-la Blinds Factory Fabric
I-Shangri-La Blind Fabric ehlala iSemi-blackout
I-Shangri-La blinds luyilo olutsha kraca oludibanisa iikhethini zombane, izikrini zefestile, iimfama zevenethi kunye nee-roller blinds. Ubomi benkonzo yelaphu le-Shangri-La blinds lide kakhulu, alikwazi ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokubanda okuphantsi ngenxa yeempawu zayo. Ngokwenene, ingxaki yokunciphisa ubomi benkonzo ngenxa yokushisa okuphantsi ayenzeki kwiindawo ezinexesha elide lokukhanya kwelanga okanye ukushisa okuphantsi kwebusika. Ngale ndlela, ubomi benkonzo yeShangri-La bandiswa kakhulu.
Ukuba indawo yangaphakathi ihle kakhulu, ngaphezu kokuwa kwemihla ngemihla kunye nokucocwa kothuli oluncinci kwilaphu, inokufikelela ngokusisiseko isiphumo seminyaka engaphezu kwe-10 yokusetyenziswa.
Factory Hot Thengisa Shangri-La Sheer Blinds Fabric 100% Polyester
Ubomi buyaphumelela kodwa bunengxolo, kwaye uhlala ufuna ukuba nenhlalakahle enjalo yokuzola noxolo. Iimfama ezihonjiswe ngobunono zahlula ilizwe langaphandle, zishiya indawo ekhethekileyo yentliziyo. Iatmosfera, iqondo lobushushu kunye nokukhanya kwendawo yokuhlala kuya kutshintsha ngokufanelekileyo, kwaye ubomi bufanele bube bubonda. Inkqubo kunye noyilo lwamakhethini amnyama anobutyebi kwaye ahlukeneyo. I-Shangri-La eyimfama eyimfama yindlela eqhelekileyo kakhulu. Ilaphu leGroeveve Shangri-La elimfamekileyo lithambile njengesilika, lihle okomsonto.
Umhombiso wasekhaya othe tyaba weShangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
I-Shangri-La blinds luyilo olutsha kraca oludibanisa iikhethini zombane, izikrini zefestile, iimfama zevenethi kunye nee-roller blinds. I-Shangri-La blinds yiyona nto ikhethekileyo yokugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Isetyenziswa kakhulu kwiivillas, izakhiwo zeofisi, iikhefi, iiresityu, iihotele kunye nezinye iindawo. Ilaphu le-Shangri-La blinds line-three-layer structure, elenziwe ngamalaphu amabini alungelelaniswe ngokuthe nkqo okuhambisa ukukhanya adityaniswe kumaleko amaninzi amalaphu akhusela ukukhanya kumgama olinganayo.
Ilaphu le-groupeve shangri-La blinds likhethekile ngokuthungwa kwaye lihle ngenkangeleko elenziwe nge-polyester eyi-100%. Ukudibanisa amalaphu anqamlezileyo phakathi kwamanqwanqwa amabini amalaphu amhlophe anokugcina igumbi lithambile. Jika i-blade ukulungisa ubunzulu bokukhanya. Ilaphu elikhethekileyo le-shangri-La blinds liyakwazi ukugcina umbala uhambelana ixesha elide. Umthunzi oqinileyo. Ukucocwa kwe-ultrasonic yeendwangu kungasetyenziselwa ukwenza iingubo zibukeke ziqaqambile njengentsha.
Uyilo lwangoku lweRoller Iimfama zeShangri-la Zebra Fabric yeKhaya
I-Shangri-La zebra blinds luyilo olutsha kraca oludibanisa iikhethini zombane, izikrini zefestile, ii-venetian blinds kunye nee-roller blinds. I-Shangri-La blinds yiyona nto ikhethekileyo yokugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo.
Ilaphu le-Groupeve Shangri-La eliyimfama aliyi kuba neengxaki zegluing, yellowing and deformation. Umsonto kunye nelom zingeniswa kumazwe angaphandle. Zilukwe kanye ngexesha lenkqubo yokuvelisa kwaye zifumana umsebenzi olandelayo njengobushushu obuphezulu kunye nokusetwa koxinzelelo oluphezulu ukufumana ilaphu eliphezulu elithe tyaba eliphezulu. Into esiyizisayo ayilona nje ilaphu, kodwa nesimo sengqondo ngobomi. Ngaphezu koko, umqulu ngamnye welaphu le-shangri-la zebra ziyavavanywa phambi kokuthunyelwa.
Isiqinisekiso soMgangatho iShangri-La Sheer Blinds Fabric For Office
I-Shangri-La sheer blinds (ekwabizwa ngokuba yi-sheer blinds) luhlobo oluthile lwee-blind-control blinds, olunamaphepha ahambelanayo anamacangca amaninzi. Umbala welaphu le-Groeve Shangri-La eliyimfama licocekile kwaye ligcwele. Xa ukhetha ilaphu le-Shangri-La blinds, into yokuqala ebamba amehlo abantu yimibala yabo ecocekileyo kunye ne-luster epheleleyo, yonke evela kumsonto ovela kumazwe angaphandle kunye ne-looms.
Xa ukhetha ilaphu, abathengi kufuneka banikele ingqalelo kuzo zonke iimpawu zelaphu le-Shangri-La sheer blinds, kwaye ke kuphela unokukhetha ilaphu le-Shangri-La sheer blinds eyanelisayo, ekhululekile, kwaye ethembekileyo. Kungakhathaliseki ukuba uluphi uhlobo olufunayo, iisampuli zamahhala ziyafumaneka ukuze ukhangele umgangatho kwaye ukhethe umbala.
Umzi-mveliso oshushu uThengisa iLanga elineeMthunzi eziThathu iShangri-La Roller iiBlinds Fabric 100% Blackout
I-Shangri-La i-roller blinds idibanisa izikrini zefestile, i-venetian blinds kunye ne-roller blinds, enemfashini kwaye imfutshane, ukukhanya kunokulungelelaniswa ngokukhululekileyo, okunomthunzi kodwa kungabonakali indawo. Isetyenziswa ngokubanzi kumakhaya, iihotele, iivenkile zokutyela, iivillas, izakhiwo zeofisi eziphezulu kunye nezinye iindawo.
Amalaphu e-groupeve shangri-La roller blinds aphathwa ngokungena manzi, ukungunda-ubungqina kunye nonyango oluchasene ne-static-emva kokulungiswa okukhethekileyo, akukho lula ukubumba kunye nothuli, kwaye kulula ukucoca nokugcina. Ukongeza, i-semi-blackout kunye ne-blackout series ye-Shangri-La roller blinds fabrics ingakwazi ukusasaza ukukhanya okubonakalayo ngaphakathi, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla okukhanyisa.
Ubulula kunye nobuGcisa iShangri-La Fabric 3m Ububanzi
I-Shangri-La blinds idibanisa izikrini zefestile, i-venetian blinds kunye ne-roller blinds, enemfashini kwaye imfutshane, ukukhanya kunokulungiswa ngokukhululekileyo, okunomthunzi kodwa kungabonakali indawo. Amalaphu e-Groupeve Shangri-La aphathwa ngonyango olungangeni manzi, i-mildew-proof kunye ne-anti-static-emva kokulungiswa okukhethekileyo, akukho lula ukubumba kunye nothuli, kwaye kulula ukuyicoca nokugcina; Ukongeza, i-semi-blackout kunye ne-blackout series ye-Shangri-La blinds isasaza ukukhanya okubonakalayo ngaphakathi, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla okukhanyisa. Bobabini banokuvala ngaphezu kwe-95% yemitha ye-ultraviolet eyingozi kunye nokukhusela ifenitshala yangaphakathi.
Sinikezela ngeesampulu zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngokuthe ngqo phambi komyalelo. Ngaphezu koko, amalaphu ethu anombala otyebileyo kwaye alandela indlela yefashoni yehlabathi.
Ilaphu likaShangri-La Roller eliMthunzi eliThathu kwiiNdawo zokutyela
Amalaphu e-groupeve shangri-La roller blinds enziwe nge-100% yepolyester, ububanzi yi-3m kwaye iphathwa ngonyango olungangeni manzi, ukungunda kunye ne-anti-static-emva kokulungiswa okukhethekileyo, akukho lula ukubumba kunye nothuli, kwaye kulula ukuyicoca. kwaye ugcine; Amalaphu e-shangri-La roller blinds nawo anokunciphisa ngokufanelekileyo ukusasazeka kwemitha yelanga engena kwigumbi, ngaloo ndlela kuncitshiswe ukusetyenziswa kwamandla okupholisa umoya kunye nezinye izixhobo.